Amniga Android: ku ilaali mobilkaaga ama kaniiniga talooyinkaan | Androidsis
Waa run in tirada nidaamyada kala duwan ee hawlgalka iyo barnaamijyada aan ku qaban karno howlaha maalinlaha ah, seguridad waa sii kordheysaa gariir, sidaa darteed Android ha ka waaban inaad la shaqeyso ujeedooyin cad si loo siiyo dhammaan isticmaaleyaasha amniga ugu weyn, iskuday looga hortago dhacdooyinka noocyada kala geddisan, adoo dib u eegis ku sameynaya nashqadaha, waxay bixiyaan ammaan aad u ballaaran oo isku dayaya inay yareeyaan dhacdooyinka iyadoo ay ugu wacan tahay howlaha barxadda, ogaanshaha nuglaanta isticmaalayaasha, xayiraya xisaabaadka aan raacin qawaaniinta isla markaana dhaqso wax uga qabta si ay u muujiyaan amniga ugu weyn
Haddii aad ka walwalsan tahay xatooyada xogta, fayrasyada ama Trojans-ka u jira Android oo xadi kara macluumaadkaaga ugu qaalisan (xiriirada, farriimaha, sawirada iyo waxyaabo kale oo badan), halkan waxaa ah ururinta wararka kaa caawinaya inaad iska ilaaliso naftaada sida ugu macquulsan weerarada ama cilladaha amniga ee jira ee loogu talagalay Android.
Sidee loo adeegsadaa VPN taleefanka gacanta?
by Miguel Gaton samee Bilaha 4 .
Ku xirnaanshaha mar walba waa lama huraan maanta waana qayb ka mid ah jadwalka maalinlaha ah ee isticmaaleyaal badan oo ...
by DaniPlay samee Bilaha 12 .
Dhowr bilood hadda, khayaanada 'LokiBot' waxay dabagal ku haysay dadka isticmaala Android iyo waliba kuwa ...
Fariimo 'Ghimob' cusub ayaa bartilmaameedsanaya barnaamijyada bangiyada
Ma noqon doonto khayaanada ugu dambeysa ee loo yaqaan 'Ghimob' ee la timaadda Android, laakiin waa digniinta ugu habboon ee ...
Ajax, falanqaynta nidaamka amniga wireless ugu dhaqsaha badan ee la hirgeliyo
by Miguel Gaton samee Sannadka 1 .
U samaynta nidaamkaaga amniga gurigaaga ama meheraddaada waa lacag badbaadin fiican iyo sidoo kale inaad haysato ...
8 talo si aad uga ilaaliso taleefankaaga Android halista internetka
Ma ka warqabtaa dhammaan xogta iyo macluumaadka gaarka ah ee aad ku kaydiso taleefankaaga gacanta? Sawirro, muuqaalo, taariikh ...
Sida loo basaaso WhatsApp ama isla xisaabta ugu hayso laba terminaal oo kala duwan
by Ignacio Sala samee 2 sano .
Si aad u bilawdo, waxaan kuu sheegayaa in qoraalkan aan ku sharaxi doono sida loo basaaso WhatsApp, waa qoraal ku wajahan ...
Galaxy S7 iyo S7 Edge waxay sii wadaan inay helaan cusboonaysiinta amniga
by Manuel Ramirez samee 2 sano .
Waxaan ku dhownahay 4 sano kadib markii la bilaabay Galaxy S7 iyo S7 Edge welina waxay helayaan cusbooneysiin ...
KA DIGTOONOW !! Codsiyo shaki leh oo la marin habaabin karo, oo ku jira Google Play Store
by Francisco Ruiz samee 2 sano .
Maanta waxaan idiin soo gudbinayaa muuqaal video ka duwan wixii aad ku baran jirteen halkan 'Androidsis', muuqaal aan socon ...
Baadhitaanka danbiga ayaa sheeganaya Qarsoodiga Android wuu ka fiican yahay hadda iPhone
Beer kale oo ay Android kaga garaacdo Apple iphone-keeda. Markan waxay ku jirtaa sirta ...
Waxay ahayd toddobaad, toddobo maalmood oo dheer in halkan laga bilaabo Androidsis ay ku cambaareysay khaladaad suurtagal ah oo soo saare ...
DIGNIINKA ANDROID: Iska jir phishing, yaanan lagu kadsoomin !!
Waxaan kula soo noqoneynaa ALERT ANDROID, ama wixii lamid ah, oo ah maqaal mowduuc ku saabsan amniga ...
Qufulka App, mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan ee lagu xakameeyo asturnaanta Android-kaaga
Hubi badhanka cusbooneysiinta ayaa ku jabay qaar ka mid ah Android
Samsung Galaxy J5 (2017) wuxuu helayaa casriyeyn amniga ah oo ka dhan ah BlueBorne
Iska ilaali ciyaarta nibiriga buluugga ah !!
Sida loo kaydiyo sawirada laga soo diro Android si nabad ah loogu diro (iyo sidoo kale fariimo)
Farriinta kaliya 2KB waxay awood u leedahay inay jabiso WhatsApp
Sida loo sameeyo keyd IMEI-ka boosteejadaada si aad u fudud [ROOT USERS]
Codsiyada lagu hagaajinayo Android runtii ma loo baahan yahay?
Sida loo isticmaalo Maareeyaha Qalabka Android, Maareeyaha Qalabka Android
Digniinta Android!: Ka taxaddar barnaamijka Kaamiradda Muuqaalka Habeenkii
WhatsApp waa loo oggol yahay inuu sameeyo wax kasta oo aan ogolaansho naga haysan